विद्युत अभावमा नेपालका ठूला कलकारखाना बन्द, के फेरि लोडशेडिङ हुन लागेको हो ?
झ्याप्पझ्याप्प बत्ती गइरहने गुनासो बढ्यो
नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणले बिजुली आपूर्ति गर्न नसकेपछि देशभरिका सबै ठूला उद्योगहरू बुधवारबाट बन्द भएका छन्। पछिल्लो समय भारतबाट आयात गर्ने गरिएको विद्युत्‌ रोकिएपछि ठूला उद्योगमा लोडशेडिङ गर्नुपरेको प्राधिकरणका प्रवक्ताले बीबीसीलाई बताए।
प्राधिकरणका अनुसार भारतको बिहारमा अहिले प्रसारणलाइनहरू मर्मत भइरहेको छ।
‘प्रसारणलाइन मर्मत भइरहेकाले केही दिनका लागि बिजुली आपूर्ति गर्न सक्दैनौँ भनेर बुधवार हामीलाई जानकारी आएको हो, प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईले भने।
के फेरि लोडशेडिङ हुन लागेको हो ?
आपूर्तिमा देखिएको पछिल्लो चुनौतीसँगै कतिपय सर्वसाधारणले फेरि लोडशेडिङ सुरु हुने हो कि भन्ने आशङ्का गर्न थालेका छन्।
सुदीप नाम गरेका ट्विटर प्रयोगकर्ताले बिजुली आपूर्तिमा हिजोआज भइरहेको अवरोधबारे प्रश्न गरेका छन्।
उनी लेख्छन्, ‘लाइन कति काट्या के ! उद्योगरबढी विद्युत् चाहिने ठाउँहरूमा झन् बिजोग छ, बिनासूचना घन्टा-घन्टामा लाइन गएर हैरान। अब त कमसेकम लोडशेडिङ तालिका निकालेर कृपा गरिदिए अनुगृहीत हुन्थे होला जनता, अत्ति भइसक्यो त हौ।’
कहिलेदेखि सामान्य हुन्छ अवस्था ?
प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार भारतबाट विद्युत्‌ आपूर्ति फेरि सुरु हुन केही दिन लाग्नेछ।
‘उनीहरूले एकदम छोटो समयका लागि भनेका छन्। धेरै समय त नलाग्ला, तर मर्मतको काम भएकोले ठ्याक्कै समय भन्न उनीहरूलाई पनि गाह्रो भएको हो।’
नेपालले पछिल्लो समय बिहारबाट बिहान ६ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म करिब ३०० मेगावाट बिजुली आयात गर्दै आएको छ। झ्याप्पझ्याप्प बत्ती गइरहने गुनासो बढेको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार नेपालमा अहिले करिब ३३,००० मेगावाट आवर बिजुलीको माग रहेको छ।त्यसमध्ये करिब २१,००० मेगावाट आवर आन्तरिक उत्पादनबाटै पूरा हुने गरेको छ।
‘दिनअनुसार त्यसमा केही थपघट हुन्छ। ११,०००(१२,००० मेगावाट आवर बिजुली चाहिँ अहिले हामीले भारतबाट आयात गर्नुपर्छ,’ प्रवक्ता भट्टराईले भने।